Mmekọahụ chat roulette
Mmekọahụ nkata roulette bụ ohere iji nwee ọmarịcha mmekọahụ maka iji nkata vidio vidio. Ọ gaghị esiri gị ike ịchọta nwa agbọghọ ma ọ bụ nwa okorobịa maka inwe mmekọahụ n'ihu igwefoto weebụ na obodo gị. Ihe niile achọrọ bụ igosi okike gị wee pịa "Malite Ọchụchọ". Mgbe ahụ nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ n'onwe ya ga-amalite inye nhọrọ nke onye nwere ike inwe mmekọ nwoke na nwanyị. Maka ụmụ okorobịa, mkparịta ụka mkparịta ụka porn ga-enye ụmụ nwanyị nnukwu nhọrọ maka mkparịta ụka mmekọahụ, ụmụ agbọghọ na-eme ka mmekọrịta nwoke na nwanyị nwee mmekọrịta nwoke na nwanyị ma nwee mkparịta ụka a na-akpali akpali.
Russian roulette: mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ịntanetị
Amalitere na November 2009, Chatroulette.com gbara n'abalị - naanị ọnwa atọ ka e mesịrị, akwụkwọ abụọ nwere ikike dere banyere ya: New York Times na Magazin New York. Akụkọ a nke ndị nta akụkọ na-akọ dị ka ihe na-eche n'echiche nke ezigbo nrọ America, ya mere, ọ hụrụ onye na-agụ akwụkwọ ọdịda anyanwụ n'anya nke ndị Russia pịa ya ozugbo.
Akụkọ dị ka ndị a: Nwa akwụkwọ 17 dị na Moscow bụ Andrey Ternovsky, dị ka ọtụtụ narị ụmụaka ndị ọzọ, mepụtara weebụsaịtị iji kpọtụrụ ndị enyi ya. Ihe kachasị mkpa n'echiche abụghị ịhọrọ onye na-ekwu okwu, dịka a na-eme ya n'ụdị nkwukọrịta ọ bụla mara anyị, kama "ịbanye" ya na mberede - n'echiche nke onye okike nke ọrụ ahụ, ya mere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ka oge na-aga, saịtị ahụ, nke naanị mmadụ ole na ole jiri ya, wee bụrụ ihe ewu ewu. Okwu ọnụ na-arụ ọrụ karịa mgbasa ozi ọ bụla. Kedu ihe na-atọ ụtọ ma bụrụkwa obere ihe: ọrụ ahụ nwetara aha mbụ ya ebe dị anya ebe ọ malitere - ọ bụghị na Russia, kama na mba ndị na-asụ Bekee. N'ókèala CIS, ihe enyemaka ahụ adaghị n'ọnọdụ nke ndị na-ege ntị na-ege ntị ruo oge mgbe mgbasa ozi ọdịda anyanwụ dere banyere ya.
Yabụ, site na ịpị aha ngalaba aha ama ama ugbu a na ebe adreesị, a na-akpọrọ onye ọrụ gaa na peeji nke nwere interface dị mfe. N'elu isi awọ-ọcha, enwere windo abụọ, nke ọ bụla ga-enwe onyonyo ebugharị site na igwefoto weebụ. Na ekpe bụ onye na-ekwuchitere gị, n’aka nri ka ị bụ. N'ezie, maka ọrụ iji rụọ ọrụ, ịkwesịrị inwe igwe okwu, igwefoto na njikọ stablentanetị kwụsiri ike.
Site na ịpị bọtịnụ "Egwuregwu Ọhụrụ", ị ga-ahụ onye na-ekwu okwu gị ma soro ya kparịta ụka obere, ma ọ bụ pịa "Ọzọ" wee chọta onye ka mma. Agbanyeghị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ ma chọọ ịkparịta ụka banyere nke a na nke ahụ, nkata ahụ nwere ike ịkwụsị, ebe ọ bụ na onye ahụ "n'akụkụ nke ọzọ nke Internetntanetị" nwekwara ikike ịhọrọ.
Mmeghachi omume nye ọrụ dị mfe dị mfe, ma ọ bụrụ na ọ bụghị oge ochie dị anya nke ukwuu.
Ọtụtụ ụlọ mgbasa ozi Russia na ndị na-ede blọgụ na-akatọ Cahtroulette.com dịka "ebe maka ndị rụrụ arụ." Nke a abụghị ikpe na-enweghị ntọala. Naanị lelee nseta ihuenyo dị n'elu iji ghọta na ị nwere ike ịhụ ọ bụghị naanị obi ụtọ, ihu obi ụtọ, kamakwa ihe pụrụ iche. Ma ọ bụ naanị mma ma ọ bụrụ na ọ bụ a ejị ekike ma ọ bụ a rọrọ odo toy. Nke bụ eziokwu bụ na ndị ọbịa na-enweghị ntụkwasị obi na saịtị, na-eji aha ha eme ihe, na-emebi iwu ndị bụ isi edere na ibe: "16 + na No Nudity".
Na "mba ọzọ", na ntụle, "rie ma too". Site na nyocha nke okporo ụzọ weebụsaịtị nke Techcrunch na-enye, 47% nke ndị ọrụ bụ ndị America, ndị France na 15% na-esote, na ndị Canada nọ n'ọnọdụ nke atọ (ihe na-erughị 10%). Na nke a, n'ozuzu, enwere ike ịkọwa ya n'ụzọ dị mfe - ndị nnọchi anya nke mba ndị a na-amalite mkparịta ụka nke ọma na onye njem ibe anyị n'ụgbọ elu, onye agbata obi na ụlọ oriri na ọ cafụ ,ụ, na n'ozuzu ha na-emeghe ndị maara nke ọma na mkparịta ụka - n'adịghị ka ndị obodo anyị.
Mkpokọta saịtị ahụ agafeela ihe karịrị nde mmadụ anọ kwa ọnwa, a na-atụkwa okporo ụzọ kwa ụbọchị n'ọtụtụ narị puku. Ebe ị tụlere mmadụ ole na-anọ n'ịntanetị kwa nkeji ọ bụla, ọ na-esiri ike ịchọta onye a ma ama, onye gị na ya chọrọ ka gị na ya kwurịta okwu. Ma eleghị anya. Ọtụtụ ndị a ma ama na-ekweta na mgbe ụfọdụ ha na-aga na saịtị ahụ, ọbụnakwa na-etinye oge zuru oke ebe ahụ.
Agbanyeghị, oge ụfọdụ ndị na - emegide ya na - eme: ụfọdụ ndị amaghi ama na - ejikwa nweta ọmarịcha ụwa niile. Dịka ọmụmaatụ, Merton bụ onye na-akụ egwu na-akụzi egwu, bụ onye chọtara ọtụtụ puku ndị na-ege ntị na ekele na nnukwu netwọkụ ahụ.
N'adịghị ka Chatroulette, nke a na-eji maka ndị ọrụ mba ọzọ, a na-akwalite ọrụ davaipogovorim.ru naanị na Runet. Anyị agaghị akọwapụta arụmọrụ ahụ, ebe ọ bụ na ọ na-ekwughachi ọrụ ahụ akọwalarị, mana rịba ama na ndị mmepe ahụ agbakwunyela otu nkọwa dị oke mkpa: ngwa pụrụ iche maka VKontakte, nke ga-enye gị ohere ịme mkparịta ụka na-ahapụghị "ụlọ" gị.
Isi ndaghachi nke akụ na ngwa ahụ (ma ha na-arụ ọrụ synchronously) bụ ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị ọrụ. N'oge ule, ugbua na nke ise ma ọ bụ nke isii achọrọ m ikwu, sị: "Bah! Niile ihu mara!"
N'oge na-adịbeghị anya, dịka onye na-agụ ihe anyị lebara anya na-echeta, otu n'ime injin ọchụchọ na ọnụ ụzọ multifunctional - Mail.Ru - meghere nke ya nke nkata vidiyo a ma ama. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụrụ na ịnweghị ịlele igbe "Naanị iji igwefoto weebụ" na oge, a ga-enyocha onye na-ekwu okwu ọ bụghị naanị n'etiti ndị na-eji ọrụ ahụ ugbu a, mana n'etiti ha niile, ndị ọrụ Mail.Ru niile (ndị nọ ebe ahụ) ọtụtụ nde), mana Nke a pụtara na ọ ga-ekwe omume ịlele eserese eserese na-enweghị ngwụcha ogologo oge. Ma ọ bụghị ya, ị gaghị ahụ ihe dị iche na arụmọrụ.
Mkparịta ụka a na-enweghị usoro na-enye nhọrọ abụọ ịhọrọ site na: ederede na vidiyo. Ebe nrụọrụ ahụ na-arụ ọrụ ngwa ngwa, enwere ọtụtụ ndị ọrụ na ntanetị. Ewezuga enwere nkwukọrịta ederede, enweghị ndịiche ndị ọzọ na Chatroulette.
Flytok.ru bụ ụdị mgbagwoju anya na agba dị iche iche nke otu nkata vidiyo ahụ. Mgbe ị banyere na saịtị ahụ, ị ​​ga-ahụ ụdị abụọ ozugbo - otu maka nbanye dị mfe, nke ọzọ maka ndebanye aha. Agbanyeghị, n'oge ule, ndebanye aha achọghị ịrụ ọrụ n'ụzọ ọ bụla, dịka ọkara nke njikọ njikọ ahụ. Ya mere, anyị ga-atụle naanị ụdị "ọrụ dị mfe" nke ọrụ ahụ ma lekwasị anya n'echiche nke ndị ọrụ ibe.
Ihe mbu nke na - adọrọ uche gị: akụ adịghị mfe dịka o yiri. O doro anya na interface na animation, ndebanye aha achọrọ. Ọ bụghị naanị ndị bịara abịa na-agbakọta ebe a, na-achọ ịgbanwe okwu ole na ole, mana ndị nwere nnukwu mmasị na nkwukọrịta. Nwere ike mejupụta profaịlụ gị, nwee ndị enyi, lelee mgbasa ozi, ọba foto, gụọ na blog. Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ saịtị ahụ erughị na Chatroulette, mana oge ụfọdụ ọ nwere ike karịa ọrụ Russia ọzọ. Ọrụ a dị nso na netwọkụ mmekọrịta karịa prototype ya.
Enwere ike ikwu otu ihe banyere TinyChat Na - esote - site n’itinye na ọ bụ akụ mba ọzọ, obodo na ndị ọrụ nọ ebe ahụ bụ ndị mba ofesi - nke a bụ nkata vidio mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ndị mmadụ na-abịa saịtị a ọ bụghị otu nkeji, kama ọ bụ maka nkwukọrịta zuru oke. Bata, hota obodo ma bido ikwurita okwu na okwu a. Ọ bụrụ n’ịchọrọ, ịnwere ike ịdebanye aha ma mepụta obodo nke gị ma chere ka ndị ọzọ sonyere gị. I nwere ike ime na-enweghị ndebanye site na-egbu osisi site na gị Facebook ma ọ bụ Twitter akaụntụ.
Video nkata roulette - ọrụ adaba n'ịntanetị
Onye ọ bụla nke na-agba mbọ maka mmekọrịta ọhụrụ, chọrọ ikwu banyere isiokwu ndị na-atọ ụtọ, nwee ndị enyi, zute ụmụ agbọghọ, kwesịrị ịnwale ụzọ dị mfe ma dị mma nke mkpakọrịta nwoke na nwanyị n'ịntanetị - chat roulette. Ihe omuma a puru iche megheere otutu nde ndi ji Intanet eme ihe, dika i nwere mmasi n’inwe mkparita uka, ima na enyi. Nhọrọ nke onye na-eme mkparịta ụka na-eme n'onwe ya, ọ nwere ike ịbụ mmadụ si Russia, Belarus, Germany, United States na ọbụna Australia.
Mkparịta ụka vidio na ụmụ agbọghọ na-enye ụmụ okorobịa ohere ịmekọrịta nkwukọrịta ha na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ha ma mee ụmụ nwanyị n'ụwa niile. Enwere ezigbo ohere na n'etiti ndị na-eme mkparịta ụka nkịtị, enwere mmụọ mmụọ. Roulette ikori na ụmụ agbọghọ bụ a pụrụ ịdabere na osote na-achọta mkpụrụ obi gị ma ọ bụ nwunye!
Olee video nkata roulette ọrụ
Onye ọ bụla kọmputa ya nwere igwefoto vidiyo, igwe okwu na ndị ọkà okwu nwere ike ịnweta nkwukọrịta n'ịntanetị na-enweghị oke. E kwuwerị, ọ bụ akụrụngwa a na-eme ka o kwe omume ịgbasa onyonyo vidiyo ma duzie mkparịta ụka.
Ọ dịghị mkpa ịbanye aha, mana nkata vidiyo na-enye ndị ọrụ edebanyere nhọrọ karịa ndị na-amaghị aha. Iji gosi onwe gị na ọkụ gị kachasị mma, a na-atụ aro ka ịdekọ obere vidiyo nnabata.
Site na ịpị bọtịnụ "Malite Search", ị na-akpaghị aka ịghọ onye òtù nke usoro ahụ. Ihe onyonyo nke onye nwere ike ime ihe na-egosi na windo nkata vidiyo: ị hụrụ ma nụ mmadụ, ọ na-ahụ ma nụ gị. Ọ bụrụ na ụdị onye interlocutor dị gị ka ihe na-adịghị mma ma ọ bụ na-enweghị mmasị, pịa bọtịnụ "Na-esote" wee gaa onye ọhụrụ.
Gịnị bụ uru nke video nkata roulette
Nke mbụ, nkata vidio bụ ngwa ọrụ iji chọta ndị enyi ọhụrụ maka mkparịta ụka dị ụtọ, dịkwa mfe. Ebumnuche iji ọrụ anyị maka onye ọ bụla akọwapụtara nwere ike ịdị iche.
Ọrụ anyị dị n'ịntanetị na-enyere ndị ọrụ aka idozi ọtụtụ nsogbu onwe onye:
Imeri ogige. Ihere na enweghị ike ikwurịta okwu na-eme ka ndụ sie ezigbo ike. Mkparịta ụka vidio anyị na-enyere aka ịnweta ntụkwasị obi nke onwe, mụta ịdị na-abanye mkparịta ụka n'ụzọ dị mfe, na-enwe mkparịta ụka nke ndị bịara abịa na ọbụnakwa ịchụ nwoke. Mara nke amaghị aha, nkewa site na onye na-eme mkparịta ụka site na ihuenyo nlele, yana ikike ịkwụsịtụ mkparịta ụka n'oge ọ bụla na-enye mmetụta nke nchekwa ma nye gị ohere inwe ahụ iru ala na nnwere onwe.
Chọta otu ụzọ. Mkparịta ụka Roulette na ụmụ agbọghọ na-enye gị ohere ịmepụta ntọala na-enweghị aha, mmekọrịta mmekọrịta dị mma n'ịntanetị, nke mmepe ya ga-adabere naanị na gị. Ikekwe, unu ga-enwe mmasị n’ebe ibe unu nọ nke na unu kpebiri ikwurịta okwu n’ offlinentanet. Ọtụtụ ndị, nkata vidio anyị abụrụla ebe ezigbo ịhụnanya na-ezukọ.
Nkwado nke uche. N'oge ihe siri ike, mgbe ọ na-enweghị onye ọ hụrụ n'anya nọ nso, ọ naghị adị mfe ịnagide nsogbu ndị bilitere naanị gị. N'ọnọdụ ndị dị otú a, ọbụnadị onye bịara abịa nwere ike ịwụpụ mmụọ ya, nkwado na omume na ezigbo ndụmọdụ nke onye ọbịa ga-aba ezigbo uru.
Otu esi enweta ndi enyi ohuru na nkata
Ọ dị mfe izute, inwe mkparịta ụka, ịmalite mmekọrịta na nkata vidiyo. Ewela iwe mgbe onye na - ekwu okwu kwusi mkparịta ụka ahụ na mbụ: ọ gaghị ekwe omume ime ihe na - amasị mmadụ niile. Mkparịta ụka vidio anyị na ụmụ agbọghọ na-enye gị ohere isoro ọtụtụ puku mmadụ kwurịta okwu. Gbalịa ile anya dị ka enyi na enyi, dị mma n'anya, nwee ezi uche, nwee ọgụgụ isi, na-aivea ntị na onye na-agwa gị okwu, ị ga-ahụkwa onye nwere ezigbo mmasị n'ebe ị nọ.
Nwee mmekọrịta, egbula oge ịbụ onye mbụ ị ga - akpọtụrụ - ndị ọhụụ ọhụụ na ndị bara uru ga - apụta na ndụ gị!
Nkata Vidio RF © 2018
Kasị ama Russia video nkata!
You chọrọ ihe ndị na-enwu gbaa na obi ụtọ site na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị? Obi dị anyị ụtọ nke ukwuu ịnye nkata vidiyo ọhụụ kachasị ọhụrụ, nke zuru oke, nke ezubere maka ịchọta ndị nwere ụdị echiche ma wepụta oge na ịntanetị. Ọkachamara ọkachamara n'ime ụlọ anyị edeela ihe na-adọrọ mmasị: ọ nwere interface dị mma, nke bara uru. Nchịkwa njikwa - ga - enye gị ohere iji oge na - atọ ụtọ na ebe ndị enyi gị ma ọ bụ ndị ọhụụ ọhụụ mara.
Kwa afọ, ewu ewu nke isi mmalite na-abawanye n'ihi ịnye ngwaọrụ nkwukọrịta. Kwere - ọ dị mma, n'ezie enwere ike ịnweta omume ọma na onye ọ bụla, ịnọ n'akụkụ dị iche iche nke ụwa, na-ebilighị ọrụ (kọmputa) ma ọ bụ laptọọpụ. Ekwesiri ighota na achoghi itinye ego itinye ego buru ibu. Dị ka a na-achị, a na-akwụ ụgwọ maka iji ndokwa nke ọrụ nkwukọrịta, ọrụ nkata vidiyo. Enweghi ike iji obere ego mefu ego tụnyere obere njem nke obere ụgbọ ala.
Companylọ ọrụ anyị emepụtala ngwa VKontakte nke ọtụtụ mmadụ na-abịa nkata. Ọ dị oke mma ịchọta ndị enyi maka mkparịta ụka site na ịpị igodo bea? Ọ bịara dịkwuo mfe ịchọ satellite. Usoro a dị mfe nke ukwuu - iji chọta onye òtù ọlụlụ mkpụrụ obi na-ahapụghị ụlọ gị, ị nwere ike ugbu a site na enyemaka nke ọrụ pụrụ iche. Enwere ike ịme "usoro" dum site na ụlọ ọrụ alụmdi na nwunye nke ụdị a, na ozugbo - site na itinye ya. Kwa ụbọchị, ndị ọrụ nke ụwa niile na-enweta reachability iji lelee mkparịta ụka ndị ọzọ, mana ha enweghị ike ịnya isi maka ọtụtụ ndị na-ege ntị ma ọ bụ ihe ọgbara ọhụrụ. Nke a video nkata, na a pụtara mfe nkwurịta okwu blog, na ndị ọzọ na thematic chats.
Gịnị ka nkata vidio na onye nkịtị na-eme? Not ga-ezute ọ bụghị naanị ndị na-agafe agafe, kama ndị nwere otu uche. Ọzọkwa, ọrụ ndị dị otú ahụ na-enye site na isiokwu: mkparịta ụka maka ndị ọkwọ ụgbọala, nke ọkachamara na isiokwu ndị ntorobịa, nnọkọ maka ndị okenye, ọgbọ etiti, na ndị ọzọ.
Nice mara na Russian video nkata!
Have nwere 100% nụrụ ahịrịokwu: "Ha zutere na videochate wee lụọ otu afọ mgbe e mesịrị", ma ọ bụ dịka ọmụmaatụ: "ezigbo enyi ya zutere ya". Ọtụtụ ndị enyi na enyi, ndị mmekọ ịhụnanya na-ejigharị site na iji World Wide Web, ọ bụ ezie na ọtụtụ mmadụ, gbalịrị ịmalite mmekọrịta n'ụzọ dị otu a ma n'otu oge ahụ, adaala, tụfuo atụmatụ a ruo mgbe ebighi ebi. Keduzi ebe esi arụzu ọrụ ezi uche dị na ya, oge na-aga nke ọma na nkata vidiyo na-amalite?
Tupu ịmalite, ịchọrọ ikwu ya, ihe kacha mkpa bụ ndị na-anọgidesi ike, n'ihi na e nwere ọtụtụ ndị na-eme ndị enyi site na mkparịta ụka na-akparịta ụka - ha na-eme ihere, mgbe ụfọdụ ọbụlagodi obere ụjọ, ikekwe ha enweghị nnukwu ọchịchọ. Mgbe i chechara nke ọma, ọ dị mkpa ka ị gaa nzọụkwụ a, mana buru n'uche na site na nke mbụ kwupụtara nkwupụta gị - a ga-enye gị akara ndị edepụtara. Mmadu ole - otutu echiche, ochicho ... Ka emechara, odi onye choro ihu ndi di otua? N’ihi ya, adala mbà ozugbo.
Ọ dị mfe ịmebie ụdị echiche a. Ebe ha gafere usoro ụfọdụ, akwụkwọ ozi ọ bụla na-abịa n'inyocha nzukọ nke ndị sonyere ya. Ọ bụrụ na ọbịbịa na nke ahụ, ebumnuche kwesịrị isite n'aka gị. Iji mmegharị a - gosi mkpebi siri ike, nnọgidesi ike.
Ọ dị mkpa ịmata ọkọlọtọ: Chefuo iji ahịrịokwu akpaaka. N'eziokwu, ndị ọzọ nwere ike ịgụnye ikpe ndị ahụ mgbe onye na-ekwuchitere ọnụ kpebiri iji ha mee ihe mbụ. Ọ naghị ewute gị ime ka ozi nke ọ bụla bụrụ nke pụrụ iche na nke na-atọ ụtọ mgbe ị na -ekwurịta okwu.
Cheedị ntakịrị, mmadụ nwedịrị ike ịsị - chee echiche n'echiche kama ịbụ onye na-ahụ gị. Ọ dịghị mkpa ịmalite ịgụba ọnụ ọgụgụ “oghere” ma gosipụta ihe gba ọtọ n'akụkụ igwefoto ahụ! Ọ dị mkpa iji nkwanye ugwu wee jiri ajụjụ were nwayọ bịa. Gbalịa iwepụta echiche n'eche echiche, dee nke ọma. A sị ka e kwuwe, nke a nwere ike ime ka ị nwekwuo mmasị.
Iche echiche nke ọma - isi gbakwunye nke ngwa ọ bụla dịka:
video nkata roulette
- Ezi obi. Gbalịa ime ihe nile i nwere ike. Ọ bụrụ na ị gbaa agba, enyi gị nwere ike iwe ma ọ bụrụ na ị ghọgburu. N'okwu a, mgbalị ga-abụ ihe efu ...
Ndị mmadụ enwetara nnukwu ndakpọ olileanya - ha dị ole na ole n'ime ha, mana ha na-ezukọ na ndụ kwa ụbọchị. Ọtụtụ mgbe arụmụka nke ndị a gosipụtara bụ: "na ịntanetị, ọ gwara m okwu dị iche iche ...". Ọ bụrụ n’ịchọghị ka verbiage a metụta gị - nwee obi eziokwu, ikekwe obere ịdị nwayọ, n’ezie ịkwesighi imebi iwu nke nkata vidiyo vidio Russia Videoruletka.in.ua!
Mee onyinye di nma site na izu ego.
Dịla njikere ịnwale onyinye? Nke a pụtara na ịchọtala isiokwu dabara adaba maka ezumike njikọta yana ị ga-azụta ụgwọ nke ime site na iji ngwa nke Badanga Ltd. Ọ bụrụ na ịchọrọ ndụmọdụ - mkparịta ụka nkata vidio Russia "Videoruletka" na-adụ ọdụ ka ị bulie nguzo gị site na WebMoney, Qiwi, Yandex ego, kaadị Bank ọ bụla. N'elu, enwere nhọrọ dị mma n'usoro, n'ihi na mkpụrụ ego 10 (ụbọchị 20 nke nkwukọrịta, ọ bụrụ n'otu oge ị gbalịrị ịghara inye onyinye sitere n'obi) site na iji sistemu eletriki dị n'elu - $ 10. Ndị a bụ ụzọ kachasị mma, nke kachasị baa uru, nke dị mfe, nke enweghị ajụjụ ọ bụla ga-ebili.
Nkwụ ụgwọ SMS, izipu na-aga na nọmba mkpirisi. Ọ bụ nke na-enweghị uru ọ bụla iji mejupụta usoro dị n'ime ya n'oge a. Nke a bụ naanị mkpụrụ ego 4 maka onye debanyere aha. Ọzọkwa dabere na onye ọrụ. Maka $ 10, enwere ike iri mkpụrụ ego iri, nke ejiri kaadi ụlọ akụ juputara. Imirikiti n'ime ha na-akwụ ụgwọ otu ahụ n'ihi ọsọ na na ekwentị mkpanaaka a na-agbanyeghachi ya ugboro ugboro. "Videoruletka" sere ntụnyere, na-achọpụta na ịkwụ ụgwọ site na obere nọmba, izipu SMS abaghị uru, mgbe izipụ obere ozi - ọkara nke ego - onye ọrụ ekwentị na-ewepụ ya. Nke a bụ ezigbo nsogbu nke mmejupụta ekpughere na 4, ọ bụghị iri kopecks nke mmefu miri emi. Maka kachasị mma.
Kedu ka nkata vidiyo si bịa?
Ebe ọ bụ na oge mgbe a mụrụ Internetntanetị, anyị na-agakwa ngwa ngwa n’ọganihu sayensị na teknụzụ n’ọhịa nke nkwukọrịta nke teknụzụ kọmputa ọhụụ. Ọtụtụ ndị anwaala ịchepụta ụdị mkparịta ụka a nke ga - enyere aka na ntanetị, ọbụlagodi ọ ka mma ịhụ ibe ha. Biko rịba ama na ihe niile na-eme na oge. Dị ka o kwesịrị ịdị, na nke mbụ ya, mmepe pụtara na gọọmentị, sọftụwia dị otú a enweghị atụ, nkewa; ejiri ha mee ule dị iche iche na ọrụ mmanye nke steeti. larịị. Onye amuru “enyi na enyi” amuru na aho 1988, a na akpo ya “Internet Relay Chat”. N'ezie, ụdịrị ọhụụ dị n'ọhịa: "World Movement" ghọrọ ihe ama ama ozugbo. Threadzọ ọhụrụ a bụ ntọala maka iwulite ụlọ nkata n'ịntanetị.Ọ malitere ntọala maka owuwu nke nkata vidiyo. Mgbe nwelite, nkwalite na nkwalite nke akụrụngwa arụ ọrụ nke ndị mmepe teknụzụ dere, onye ọbịa ọ bụla na sọftụwia kachasị ọhụrụ nwere ike ịdị na-ekwurịta okwu na ụdị nkata ọ bụla na-enweghị mbọ ọ bụla.
N'ime usoro mmepe nke ngwanrọ a, ụdịrị ụdị dị ugbu a. N'ihi mkpa nke onyonyo "ibi ndụ", ọ dị mkpa maka nrụpụta ngwaọrụ na-abụghị ọkọlọtọ - igwefoto weebụ. Maka oge mbụ, akụrụngwa a, ma ọ bụ ịnwere ike iji "ngwaọrụ" ahụ tụnyere, afọ atọ mgbe ngosipụta nke mmemme gasịrị, ya bụ, na 1991 (n'oge a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwe ọrụ ọ bụla nwere nke a). Ihe ohuru a nyere onye obula choro imeputa mmiri taa ma gwa ndi mmadu ndi na - achu nta okwu ma obu megidere ndi mmadu achoghi hapu ulo. Anyị ji obi ike na-ekwupụta na ndị na-akparịta ụka na vidiyo na-enwe ekele maka obere usoro dị ka kamera weebụ. Ka anyị kesaa ya na kamera - ekele!
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya, n'ezie nkịtị video nkata bụ onye ndu n'etiti yiri ọmụma mgbanwe ihe site na-ezipụ okwu. You nwere ike ịtụgharị uche mmadụ, nụ ya na ikike ide ihe, ikwu okwu, inwe mmetụta - ịnọdụ n'ụlọ. Ugbu a, ka anyị lelee uru dị n'usoro. A kwesịrị ịhụ nsọpụrụ anya! Nwere ike ịtụgharị uche onye mmegide gị. Mgbe ị nọ na nkata na-aga n'ihu ma ọ bụ na saịtị ndị a ma ama, ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma - ị nwere obi ụtọ ịhụ foto (ma ọ bụ foto, anaghị ewepu ya) - ị na-ahụ ebe a ma jide n'aka onye ị na-atụgharị. Enwere otutu ihe atụ, anyị chere na nke a abụghị akụkọ, mgbe ndị ọbịa na-ese foto ndị ọzọ, mana enwere foto nke kpakpando nke anyị amachaghị. N'ezie, ọ na-esiri ike ịkwali omume ndị ọzọ, ịghọta ezi ihe mgbaru ọsọ - maka anyị n'onwe anyị enweghị ike ịkọwa,n’agbanyeghi, mmechuihu di na nsonaazụ nke iru n’iru ya na onye ihe omuma a bu ihe doro anya. Kwere - mgbe ị na-ekwurịta okwu, anyị achọpụtalarị onye ọbịa ahụ, na agba dị iche iche ịchọrọ, dabere na foto nke ozi ọha na eze ... agwa, omume ... Ọ bụ ihe arụ jọgburu onwe ya ịchọpụta mgbe emesịrị na ọ dị ka onye ahụ e sere na foto a. Echere m na ọ bụ ihe nfụfụ karịa ịnagide eziokwu ahụ bụ na iche echiche banyere ibikọ ọnụ na mmadụ, gbasara mmekọrịta ọ bụla bara uru, ị ga-achọpụta okike ma ọ bụghị nke gị! Gbalia iji uche nke onodu ujo, nke mmechuihu nke akuko akuko nke onwe ya, onye mutara na mgbe mkparita uka di ogologo site n'enyemaka nke uzo mbufe data, nwere otutu otutu ozi na otutu ndi nwere mmetuta obi oma ... ) nhọrọ bụ onye na-awakpo nwoke na nwanyị. Agaghị m achọ ịnọ n'ọnọdụ dị otú a - nke a bụ ihe doro anya.Kwere - mgbe ị na-ekwurịta okwu, anyị achọpụtalarị onye ọbịa ahụ, na agba dị iche iche ịchọrọ, dabere na foto nke ozi ọha na eze ... agwa, omume ... Ọ bụ ihe arụ jọgburu onwe ya ịchọpụta mgbe emesịrị na ọ dị ka onye ahụ e sere na foto a. Echere m na ọ bụ ihe nfụfụ karịa ịnagide eziokwu ahụ bụ na iche echiche banyere ibikọ ọnụ na mmadụ, gbasara mmekọrịta ọ bụla bara uru, ị ga-achọpụta okike ma ọ bụghị nke gị! Gbalia iji uche nke onodu ujo, nke mmechuihu nke akuko akuko nke onwe ya, onye mutara na mgbe mkparita uka di ogologo site n'enyemaka nke uzo mbufe data, nwere otutu otutu ozi na otutu ndi nwere mmetuta obi oma ... ) nhọrọ bụ onye na-awakpo nwoke na nwanyị. Agaghị m achọ ịnọ n'ọnọdụ dị otú a - nke a bụ ihe doro anya.Kwere - mgbe ị na-ekwurịta okwu, anyị achọpụtalarị onye ọbịa ahụ, na agba dị iche iche ịchọrọ, dabere na foto nke ozi ọha na eze ... agwa, omume ... Ọ bụ ihe arụ jọgburu onwe ya ịchọpụta mgbe emesịrị na ọ dị ka onye ahụ e sere na foto a. Echere m na ọ bụ ihe nfụfụ karịa ịnagide eziokwu ahụ bụ na iche echiche banyere ibikọ ọnụ na mmadụ, gbasara mmekọrịta ọ bụla bara uru, ị ga-achọpụta okike ma ọ bụghị nke gị! Gbalịa iji uche nke ọnọdụ nke a juru, nke mmechuihu agwa nke ya akụkọ ifo, bụ onye mụtara na mgbe ogologo mkparita uka na-enyemaka nke data nnyefe ọwa, nwetara ọtụtụ narị ozi na a ụyọkọ nke ahụmahụ nti mmetụta ... na-ekiri na ya (ya ) nhọrọ bụ onye na-awakpo nwoke na nwanyị. Agaghị m achọ ịnọ n'ọnọdụ dị otú a - nke a bụ ihe doro anya.na-adabere na foto nke ozi ọha na eze ... agwa, omume ... Ọ bụ ihe arụ n'anya ịchọpụta ma emesịa na ọ dịghị ka onye ahụ e sere na foto a. Echere m na ọ bụ ihe nfụfụ karịa ịnagide eziokwu ahụ bụ na iche echiche banyere ibikọ ọnụ na mmadụ, gbasara mmekọrịta ọ bụla bara uru, ị ga-achọpụta okike ma ọ bụghị nke gị! Gbalia iji uche nke onodu ujo, nke mmechuihu nke akuko akuko nke onwe ya, onye mutara na mgbe mkparita uka di ogologo site n'enyemaka nke uzo mbufe data, nwere otutu otutu ozi na otutu ndi nwere mmetuta obi oma ... ) nhọrọ bụ onye na-awakpo nwoke na nwanyị. Agaghị m achọ ịnọ n'ọnọdụ dị otú a - nke a bụ ihe doro anya.na-adabere na foto nke ozi ọha na eze ... agwa, omume ... Ọ bụ ihe arụ n'anya ịchọpụta ma emesịa na ọ dịghị ka onye ahụ e sere na foto a. Echere m na ọ bụ ihe nfụfụ karịa ịnagide eziokwu ahụ bụ na iche echiche banyere ibikọ ọnụ na mmadụ, gbasara mmekọrịta ọ bụla bara uru, ị ga-achọpụta okike ma ọ bụghị nke gị! Gbalia iji uche nke onodu ujo, nke mmechuihu nke akuko akuko nke onwe ya, onye mutara na mgbe mkparita uka di ogologo site n'enyemaka nke uzo mbufe data, nwere otutu otutu ozi na otutu ndi nwere mmetuta obi oma ... ) nhọrọ bụ onye na-awakpo nwoke na nwanyị. Agaghị m achọ ịnọ n'ọnọdụ dị otú a - nke a bụ ihe doro anya.Ọ na-ewute gị karịa ịnagide eziokwu ahụ bụ na iche banyere ibi na mmadụ, banyere mmekọrịta ọ bụla bara uru, ị ga-achọpụta okike na ọ bụghị ihe megidere nke gị! Gbalia iji uche nke onodu ujo, nke mmechuihu nke akuko akuko nke onwe ya, onye mutara na mgbe mkparita uka di ogologo site n'enyemaka nke uzo mbufe data, nwere otutu otutu ozi na otutu ndi nwere mmetuta obi oma ... ) nhọrọ bụ onye na-awakpo nwoke na nwanyị. Agaghị m achọ ịnọ n'ọnọdụ dị otú a - nke a bụ ihe doro anya.Ọ na-ewute gị karịa ịnagide eziokwu ahụ bụ na iche banyere ibi na mmadụ, banyere mmekọrịta ọ bụla bara uru, ị ga-achọpụta okike na ọ bụghị ihe megidere nke gị! Gbalia iji uche nke onodu ujo, nke mmechuihu nke akuko akuko nke onwe ya, onye mutara na mgbe mkparita uka di ogologo site n'enyemaka nke uzo mbufe data, nwere otutu otutu ozi na otutu ndi nwere mmetuta obi oma ... ) nhọrọ bụ onye na-awakpo nwoke na nwanyị. Agaghị m achọ ịnọ n'ọnọdụ dị otú a - nke a bụ ihe doro anya.enweela ọtụtụ narị ozi na ụyọkọ nke ezigbo mmetụta uche ... na-ele anya na nhọrọ ya bụ onye na-awakpo nwoke na nwanyị. Agaghị m achọ ịnọ n'ọnọdụ dị otú a - nke a bụ ihe doro anya.enweela ọtụtụ narị ozi na ụyọkọ nke ezigbo mmetụta uche ... na-ele anya na nhọrọ ya bụ onye na-awakpo nwoke na nwanyị. Agaghị m achọ ịnọ n'ọnọdụ dị otú a - nke a bụ ihe doro anya.
Kwụsị! Iji Internet Videochat maka nkwukọrịta, ị nwere ike ị zere ụdị oge ahụ na - adịghị mma. Dị ka ọ dị na 5D - mmekorita, ịmepụta kọntaktị, mmata mara - na-ewere ọnọdụ na ọnọdụ ọkụ dị ka eziokwu dị ka o kwere mee. Ihe yiri nke mpụga dị n'ihu gị, yabụ enweghị ihe ọbụlagodi ịgụnye ụbụrụ azụrụ azụ ma chee maka ihe ọjọọ. Na-eme obi ụtọ, ebe ị nwere ntụkwasị obi zuru oke, ọ bụrụ na ọ bụghị n 'ọpụpụ na mpụga, mgbe ahụ n'eziokwu nke ebumnuche nke enyi ma ọ bụ onye maara.
Nkata vidiyo nkata na ụkpụrụ nke mmejuputa ya.
Iji jiri nkata vidiyo, ịchọrọ ihe ndị a:
- nke mbu: laptọọpụ nkeonwe nwere ohere ịnweta netwọk (iji nweta nnweta oyiyi ka mma na mkparịta ụka - a nabatara algorithm ahụ: "ọsọ ọsọ dị elu, ihe ịtụnanya");